Soo dejisan IMVU 522.0 – Vessoft
Soo dejisan IMVU
IMVU – software si aad u hesho arkaana xiriiraan adduunka 3D dalwaddii. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan dabeecad in aad doorashada, soo qaado dhar, qurxin qolka, dukaamaysi, Customize deegaanka gaar ah iwm IMVU isticmaalaa jilayaasha 3D in u saamaxaaya in ay gebi ahaanba la kulmaan, ay samaystaan ​​saaxiibo cusub oo ay leeyihiin waqti fiican. IMVU ku jira lacag ay ciyaarta in la beddelo muuqaal u eg ka dabeecad ama iibsato waxyaabaha la taaban karin ee dukaanka leh noocyo badan oo ka mid ah wax soo saarka. IMVU sidoo kale u saamaxaaya in ay abuuraan accessories kala duwan, dhar ama alaabta guriga iyo iibiyaan alaabta kuu gaarka ah si ay kuwa kale ee isticmaala.
Macaariif adduunka 3D
Waxay abuurtaa characters 3D
Awoodda loo leeyahay in labistaan ​​dabeecad iyo qurxin qolka
Jiritaanka dukaanka badan oo alaabta kala duwan
Samaynta, Iyo La iibiyaan alaabta kuu gaarka ah
Comments on IMVU:
IMVU Software la xiriira:
English, Español, 中文, 日本語... Skype 7.29.73.102
العربية, English, Українська, Français... QQ 2.11 International iyo 6.4.12593 Standard
English, Français, Español, Deutsch... TeamTalk 5.1.7
Chat Ninkii wargeeyska ahaa wuu u sahlan in ay la xiriiraan saaxiibada ee daafaha adduunka. Sidoo kale waxa ay taageertaa is-dhaafsiga faylasha, wicitaanada video iyo siro saaxiibo ka Facebook.
العربية, Français, Español, Deutsch... Battle.net 1.11.4.2368
English, Français, Español, Deutsch... TweetDeck 3.8.4
Chat Macmiilka rasmi ah u la shaqeeya shabakadaha ugu caansan ee bulshada. Software waxay leedahay weyn oo qalab loogu talagalay maamulka shabakadda oo ku habboon in macluumaadka loo baahan yahay inay helaan.
العربية, English, Українська, Français... RaidCall 8.1.8
Isgaarsiinta Voice Software si ay u qabtaan isgaarsiinta codka tayada codka sare ee dib u dhac ugu yar. Software waxaa si weyn u isticmaala ciyaartoyda iyo taageertaa abuurista kooxaha mowduuc kulamada kala duwan ee computer.
Chat Tool u fariimaha deg dega ah ee internet-ka. Software waxay leedahay hawlaha waxtar leh oo u ogolaanaya isgaadhsiinta ammaan la isticmaala.
Converters Video Converters Audio Si sahlan ay u isticmaalaan Converter faylasha warbaahinta oo kala duwan. Software wuxuu taageeraa qaabeynta fursado kala duwan oo ku daray waxyeellooyinka qaarkood inta lagu jiro qaab beddelidda.
Kadib Browser waxaa uu diiradda on download ku haboon ee content warbaahinta. Software ka kooban yahay dhowr ah qalab si download faylasha torrent iyo macluumaad kale oo ka goobood oo kala duwan.
Graphics iyo design Qalab ayaa habboon in la shaqeeyaan sawiro 3D. Software waxaa ka mid ah tiro balaadhan oo ah qalab loogu talagalay ee lagula socdo iyo abuuridda kulan video.
Horumarinta The set ee software tayada horumarinta web iyo rakibidda dhamaystiran web server ah. Software waxaa ka mid ah Apache server web, database MySQL iyo PHP script turjubaan.
العربية, English, Français, Español... NetCut 2.1.4
Imtixaanka Network Tool in iskaan kombiyuutarada ee shabakadda. Software ayaa awood u si toos ah iskaan network iyo hesho xogta kombiyuutarada ee isku xidhan.